မိုးတွေရွာရင်…. | Layma's World
Posted on June 19, 2007 by layma
ဒီနေ့မနက် အလုပ်သွားတော့ မိုးဖွဲလေးတွေ ကျနေတယ်……“မိုးရေထဲမှာ..” ဆိုပြီး post ရေးဦးမယ်လို့စဉ်းစားထားတာ…..ပြန်ရောက်လို့Blog ကို ကြည့်လိုက်တော့ ပုဂံသားက Tag ထားတယ်….ကျေးဇူးပါပဲ မောင်လေး ပုဂံသားရေ….ခုရေးနေတုန်းလည်း မိုးတွေ တ၀ုန်းဝုန်း ရွာနေတယ်……
အထက်တန်းရောက်တော့ မိုးရွာရင် စောင်ခြုံပြီးကွေးတယ်…..၀တ္ထု ဖတ်တယ်…..မှတ်မှတ်ရရ “ သူငယ်ချင်းလို့ ဘဲ ဆက်၍ခေါ်မည်ခိုင် ” ကိုဖတ်တဲ့နေ့ က မိုးရွာနေတယ်….. ဇာတ်လမ်းကလည်း “ခိုင်” ပျောက်သွားတဲ့ မိုးတွေရွာတဲ့ ညနဲ့စထားတော့ ဖတ်ရတာ အရသာရှိမှရှိ……။ ဆရာမ မစန္ဒာရဲ့ “ဂျီဟောသူ” မှာ “ရန်ကုန်သူ နဲ့ရန်ကုန်မိုး…အစိုး မရဘူး ” လို့ ရေးထားတော့ မကျေနပ်ဘူး…..။ ဒါပေမယ့် ဒီစကားမှန်ပါတယ်……မန္တလေးမိုးက ရွာမယ်ဆိုရင် ကြိုပြောတယ်….။ မန္တလေးမှာ မိုးရွာရင် class လစ်တယ်…..reason ကတော့ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ် စီးရခက် လို့ …..။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူဘ၀မှာ သူများတွေအတွက်တော့ မိုးစက်တွေက ကဗျာတပုဒ်ဖြစ်ချင် ဖြစ်ခဲ့မယ်….“လေးမ” အတွက်တော့ ဇာတ်လမ်းမရှိ…….။
“ မိုးခြိမ်းသံတွေ ….ကြားလိုက်ရတိုင်း….အတိုင်းမသိ ၀မ်းမြောက်တယ်…….”
တော်တော်များများက မိုးခြိမ်းရင်ကြောက်တယ်…..လေးမ ကပျော်တယ်…..လက်စီးပြက်ရင် သိပ်သဘောကျတာဘဲ……။ မိုးသီးတွေကိုလည်း သဘောကျတယ်….တောင်ကြီးသွားတုန်းက ဟဲဟိုးလေဆိပ်ကနေ မြို့ ထဲကို အသွားမှာ မိုးသီးတွေ ကြွေလို့ဆင်းကောက်သေးတယ်……။
မိုးသီချင်းတွေ…မိုးကဗျာတွေ…..မိုးဇာတ်လမ်းတွေ ဖွဲ့ ဆိုကြပေမယ့် လူတွေကမိုးကို သိပ်မချစ်ကြပါဘူး…..။ အတ္တသမားတွေကိုး………။ “လေးမ” လည်းတူတူပါဘဲ….အပြင်သွားတဲ့ချိန်….အလုပ်သွားတဲ့ချိန်….အ၀တ်လှန်းတဲ့ချိန်….မိုးရွာရင် သိပ်စိတ်ဆိုးတယ်……။ ရေတွေကြီးလို့ကားလမ်းတွေ ပိတ်ရင်ပိုဆိုးသေး……။ အိပ်တဲ့ အချိန်မိုးရွာရင်တော့ သဘောကျသလားမမေးနဲ့ …….။
ရေးနေတုန်း မိုးတိတ်သွားပြန်ပြီ…..။ “ရန်ကုန်မိုးနဲ့ရန်ကုန် connection အစိုးမရဘူး ”.….။ Post ကိုမြန်မြန် အဆုံးသတ်မှ……။ ခုနေများ မိုးတွေရွာရင်…………???? မိုးပက်တဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေ လိုက်ပိတ်ရမယ်…..။ ။
Filed under: Seasonal Post, Tag | Tagged: Features |
« ပျော်ခဲ့သည်……(ပ) ပျော်ခဲ့သည်…..(ဒု) »
ဂျေဘီ ( ဂျလေဘီ မဟုတ်ပါ ), on June 19, 2007 at 12:11 pm said:
” ရန်ကုန်မိုးနဲ့ ရန်ကုန် connection အစိုးမရဘူး “
ဟား…ဟား… သိပ်ကောင်းတဲ့ စာသားလေးဗျာ…
post အဆုံးသတ်သွားပုံလေး တော်တော်မိုက်တယ် …
Layma, on June 19, 2007 at 12:24 pm said:
U ကို I tag တယ်….
baganthar, on June 20, 2007 at 1:27 am said:
သူငယ်ချင်းလို့ ပဲ ဆက်၍ ခေါ်မည်ခိုင် က တော့ ဆုံးအောင်မဖတ်ရသေးဘူး။
ဂျီဟောသူ က တော့ဖတ်ပြီးသွားပြီ။
အစ်မက မိုးရာသီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံစားချက်လေးတွေတော်တော်များ တာပဲနော်။
Layma, on June 20, 2007 at 2:46 pm said:
baganthar,,,,အင်း….ဟုတ်တယ်…..ရေးပါဆိုလို့ရေးလိုက်တော့ သတိရစရာတွေ သတိရသွားတာ….ဒါတောင် အကုန်မဟုတ်သေးဘူး…..အစ်မက စာရှည်ရှည်ရေးရတာ ပျင်းလို့ ….
ပေါက်ပေါက်ဆုပ်, on June 23, 2007 at 5:18 pm said:
ရန်ကုန်မိုးနဲ့ ရန်ကုန် connection တင်အစိုးမရတာမဟုတ်ဖူး
မန်းလေးမိုးနဲ့ မန်းလေး connection လဲအစိုးမရဖူး 😛
Layma, on June 24, 2007 at 11:27 am said:
လူတိုင်းမှာ ပျော်စရာတစ်ခုစီ ရှိကြတယ်…ဒီတော့ လေးမ မှာလည်းရှိတယ် (စိုင်းစိုင်း style)…connection မကောင်းတော့ မျက်စိညောင်းသက်သာတာပေါ့ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ရယ်….တရားနဲ့ သာဖြေလိုက်ပါ…
ဂျေ, on February 4, 2008 at 8:15 am said:
မှားနေတယ် လေးမရေ အညာမိုးနဲ့ အညာသူ ဆိုတာဘဲ ကြားဘူးတယ် ရန်ကုန်မိုးအစိုးမရဘူး ဆိုတာ အမှတ်မှားနေတာပါ။ ရန်ကုန် ကတော့ ပင်လယ်နဲ့ ပိုနီးတယ် ဆိုတော့ ကုန်းတွင်းပိုင်းရောက်တဲ့ မန်းထက် မိုးပိုများနိုင်တာပေ့ါ။ စနေမိုးရွာရင်တော့ တပတ်နီးပါး ဆက်တိုက် ရွာတာ၊ တိမ်မဲမရွာ တိမ်ဖြူမစဲ ဆိုတာတွေ လည်း ရန်ကုန်မိုးအတွက် မှန်ပါတယ်။ ညီမလေး အမှတ်မှားတဲ့ စာသားအတွက်ပြောတာပါ။
သားကြွက်, on June 18, 2008 at 3:30 pm said:
မိုး မိုး ဘာလို့ ရွာ
ရွာချင်လို့ ရွာ 😛